DXRacer – Tagged "Gaming Chairs" – ICT.com.mm
DxRacer Gaming Chair PC188 (Black)K314,000
DxRacer Gaming Chair PC188 (Red)K314,000
DxRacer Gaming Chair R188 Special Edition (Green)K524,000
DxRacer Gaming Chair R95 (Pink)K441,000
DxRacer Gaming Chair PA001 (Blue)K314,000
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Polyurethane cover, Nylon base Height-adjustable arms Maximum weight supported (by hydraulic system): 110kgs Height adjustment Inclination up to 170º Suitable for users up to 1.90m tall Supported...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ DXRacer chairs are manufactured under strict quality standards to offer our customers the ultimate level of luxury and comfort. Although this chair was originally designed to heighten...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ DXRacer gaming chairs are manufactured under strict quality standards to offer our customers the ultimate level of luxury and comfort. Although our gaming chairs were originally designed...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: DxRacer Color: Red Weight: 250 LBS Height: Up to 6'2"
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Model: OH/SJ28/N Color: Black Weight: 33.00 kg / 70 lb Recommended Weight: 350 lbs / 160 kg Recommended Height: 5.8′ / 1.73 m – 6’2″ / 1.96...
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: DXRacer Model number: R198 Product packaging weight (kg): 28 Product weight (kg): 300 Product display size (cm): 130 Product packaging size (cm): 86*68*36